Wararka - Waa maxay waxyaabaha ugu caansan ee xilligan kirismaska ​​qurxinta guryaha
Village caaga Christmas caaga
Tuulada Kirismaska ​​ee Led Polyresin
Tuulada Kirismaska ​​ee Led
Nutcracker alwaax ah
Sheyga caanka ah ee loogu talagalay qurxinta guriga xilligan Kirismaska ​​waa birta sudhan ubax iyo keydka
Waa maxay sheyga ugu caansan xilligan Kirismaska?
Xilli kasta oo Kirismas ah, waxaad weydiin kartaa waa maxay waxyaabaha ku soo kordha qurxinta guryaha? Fududeeyaha waxaa laga yaabaa inuu yahay geedka kirismaska, kirismaska ​​nalka, Santa Sack, kaararka kirismaska ​​ama wax kale.
Laakiin xilli ciyaareedkan, sheyga ugu isbeddelka, waxaan soo jeedinayaa inuu yahay birta sudhan, geedaha iyo sharabaadada (birta sudhan).
Xusuusnow, xilliyadii Kirismaska ​​ee la soo dhaafay, waxaad dejin doontaa geedka kirismaska, oo waxaad saari doontaa ubaxyada kirismaska, iyo tan ugu muhiimsan, waxaad ku dhejin doontaa qaar ka mid ah sharaabadaha darbiga ama meesha dabka lagu shito ee carruurta, haddii gurigaaga si aad ah looga taxaddaray meel, ka dib waxaad u gudbin kartaa soo socda soo socota;
haddii gurigaagu uusan u qaabeyn inuu lahaado meel lagu sudho ubax, sharabaadada, sidaa darteed birta sudhan ayaa kaa caawin doonta inaad si dhib yar u xalliso dhibaatadan.
Khamaarista Birta ee leh xiisaha gaarka ah ayaa kaa caawin doonta inaad hesho meel aad sudho ubax, qurxinta geedaha, kaydka kirismaska ​​si aad u wanaagsan; iyo qodobka aadka muhiimka u ah, ma dhaawaceyso qalabka gurigaaga ku jira, waxaadna u wareejin kartaa meel kasta oo qolkaaga ka mid ah, ma ahan oo keliya hal meel go'an, oo ku habboon qurxinta.
Marka ujeedka xilligan Xmas waxaa weeye in loo laalo hangool bir ah oo loogu talagalay ubaxyadaada iyo kaydintaada kirismaska.
TALADA LACAG LA'AAN 86-0592-5626859
CINWAAN Qolka 401, No. 2, Xiayang Road, Xiamen, Fujian, Shiinaha